Manual: Olee otú Tọgharia oziolu paswọọdụ na iPhone AT & T ma ọ bụ Verizon
Ọ bụrụ na ị bụ onye iPhone onye ọrụ, ị ga-achọ na-niile kwere omume ùgwù site na ekwentị gị. Ị nwere ike ịtọ ozi olu gị gị ohuru iPhone. Ọ ga-ekwe ka ị ịgbanwe ekele si mgbe otu, na ndị mmadụ nwere ike ịhapụ gị ozi mgbe ị na-adịghị. Apple si visual ozi olu ozi olu nhazi dị nnọọ mfe na iPhone. Otú ọ dị, e nwere otu ìgwè nke ndị na-eme mkpesa na ha chefuru ha ozi olu ozi olu paswọọdụ, n'amaghị otú iji tọgharịa ozi olu ozi olu paswọọdụ na ha iPhones. Ọ bụrụ na ị na-eche ihu nsogbu kwa, echegbula. Dị nnọọ lelee na-eso usoro iji tọgharịa iPhone ozi olu ozi olu.
Nkebi nke 1: Tọgharia ozi olu ozi olu paswọọdụ na na iPhone site onwe gị
Part 2: N'ihi na AT & T iPhone: 3 nhọrọ iji tọgharịa paswọọdụ ozi olu ozi olu
Nkebi nke 3: N'ihi na Verizon iPhone: 3 nhọrọ iji tọgharịa paswọọdụ ozi olu ozi olu
Nkebi nke 4: Nzọụkwụ na iwere na-bụrụ na ọ bụrụ ozi olu gị na-adịghị arụ ọrụ
Part 5: Olee otú iji tọghata iPhone olu mail ka ederede?
E nwere ihe ole na ole ụzọ iji tọgharịa ozi olu ozi olu paswọọdụ gị iPhone. Mgbe-eweta ọrụ gị-enye gị ohere visual ozi olu ozi olu, ị nwere ike ịgbanwe paswọọdụ ozugbo gị iPhone site onwe gị. I nwere ike iso n'okpuru iji ịgbanwe paswọọdụ na ịtọ onye ọhụrụ nke bụ kwesịrị ncheta.
Nzọụkwụ 1. Gaa Setting. Pịgharịa gaa na ekwentị na enweta na ya. Ugbu a enweta na ịgbanwe oziolu paswọọdụ.
Nzọụkwụ 2. Tinye ẹdude ozi olu ozi olu paswọọdụ na pịa Emel.ya.. (Ị kwesịrị iso n'okpuru ntuziaka maka a echefu paswọọdụ. Ọ chọrọ ka kpọtụrụ na onye na enweta ọrụ.)
Nzọụkwụ 3. Tinye ọhụrụ paswọọdụ na enweta na mere. Re-abanye ọhụrụ paswọọdụ na ọzọ enweta na mere.
N'ihi na AT & T iPhone ị nwere ike ịgbanwe ma ọ bụ tọgharịa ozi olu gị paswọọdụ site na-esonụ ụzọ.
a) Ịkpọ oku 611 na-ahọrọ ọrụ ozi olu, na-eso kpaliri iji tọgharịa ozi olu gị paswọọdụ. Ọ nwere ike ịchọ ihe ọmụma banyere akaụntụ gị. Usoro a ga-enyere gị site n'izite a free ozi nwere nwa oge paswọọdụ maka ozi olu gị. Ugbu a, i nwere ike ịgbanwe paswọọdụ dị ka ị chọrọ site onwe gị (dị ka e gosiri n'elu) .Ma enweta ajụjụ akara (?) Na paswọọdụ igbe> Kpatụ AT & T oku bọtịnụ maka ọrụ nke na-abịa> ahụ, gbasoo menu ozugbo iji tọgharịa paswọọdụ maka ozi olu ozi olu.
b) I nwekwara ike tọgharịa ozi olu ozi olu si AT & T online akaụntụ: Gaa Tọgharia oziolu Paswọdu peeji na m AT & T online page. Nọmba ekwentị gị ga-egosipụta na ị pụrụ nanị tọgharịa ozi olu gị maka nke a ọnụ ọgụgụ naanị. Mgbe ahụ, pịa ka nyefere button iji nweta a nwa oge paswọọdụ iji tọgharịa ozi olu gị paswọọdụ.
c) I nwere ike tọgharịa ozi olu gị paswọọdụ si ngwa n'ihi na iPhone. Ị mkpa ibudata free myAT & T ngwa si apple ụlọ ahịa na-eso nzọụkwụ kọwara dị ka n'okpuru:
Nzọụkwụ 1. Open ngwa na-eme ka-agbanwe ozi olu ozi olu paswọọdụ. Mgbe ahụ enweta na Tọgharia oziolu Paswọdu nhọrọ.
Nzọụkwụ 2. Ị ga-nwetara a aro page. Enweta na nrụpụta button ịrụ nrụpụta maka ozi olu gị paswọọdụ.
Kwụpụ 3.Now ị nwekwara ike ịgbanwe paswọọdụ aka site na ekwentị gị site onwe gị ka a kwesịrị ncheta paswọọdụ. A na ngwa na-ahapụ gị data ojiji nsuso na ụgwọ kwụọ ụgwọ maka gị iPhone.
a) I nwere ike ọsịsọ 611 na ị na-ahọrọ ozi olu ozi olu menu, na mkpa ka ị na-agbaso kọwara ozugbo iji tọgharịa paswọọdụ gị. Ọ ga-ezitere gị ozi na a nwa oge paswọọdụ, na ị pụrụ ịgbaso mgbe e mesịrị ntụziaka nke AT & T iPhone.
b) Ọzọ, dị ka AT & T iPhone, ị nwere ike nweta My Verizon Mobile ngwa ịrụ nrụpụta si gị Verizon iPhone. E nwere ndị Tọgharia oziolu Paswọdu nhọrọ na Tọgharia bọtịnụ nwere ọhụrụ paswọọdụ mgbe ị ga-echefu ozi olu gị paswọọdụ.
c) I nwekwara ike ịnweta akaụntụ gị si Verizon website. Mkpa ka i soro ntuziaka na-esi gị Verizon iPhone ozi olu ozi olu paswọọdụ tọgharịa:
Nzọụkwụ 1. Gaa Leta My Verizon ngalaba nke Verizon website si ebe a
Nzọụkwụ 2. N'okpuru My Ngwaọrụ ngalaba ị nwere ike nweta Tọgharia Voice Mail paswọọdụ.
Nzọụkwụ 3. Ugbu a na-eso nzọụkwụ tọgharịa ozi olu ozi olu paswọọdụ.
Nzọụkwụ 3. Ebe ị ga-mkpa gị wireless ọnụ ọgụgụ na akaụntụ paswọọdụ maka Verizon. N'ihi na nzi i nwere ike tọgharịa ozi olu gị paswọọdụ n'ihi na gị na ezinụlọ ọ bụla ọnụ ọgụgụ site ebe a.
1.Did ị na-agbanwe kaadị SIM gị ma ọ bụ tọgharịa ekwentị gị na nso nso?
Mgbe ọ bụla ị tọgharịa gị iPhone ma ọ bụ itinye kaadị SIM dị iche iche na nọmba ekwentị na ngwaọrụ gị. Olu gị mail akwụsị ịrụ ọrụ, na ị nwekwara ike ịhụ obere acha ọbara ọbara na akara ngosi na n'ihu ihuenyo.
Na-otú ahụ ikpe, ị ga-eso nkịtị olu mail ebighị usoro iji rụọ ọrụ ọrụ ahụ. Jide n'aka na gị kwa ọnwa atụmatụ ma ọ bụ ịkwụ ụgwọ dị ka ị na-aga atụmatụ awade olu mail ọrụ.
2.Check akpọ ebugharị ntọala
Ọ bụrụ na gị olu mail na-adịghị arụ ọrụ, ihe kacha mkpa na ị chọrọ ime bụ ego oku ebugharị ebighị ọnọdụ.
Pịa na ntọala, mgbe ahụ, ntọala ekwentị, na mgbe ahụ ego oku ebugharị ọnọdụ. Oku na-aga ebugharị atụmatụ ga-agbanwuru ha, na na na ihuenyo kwesịkwara olu mail igbe nọmba maka gị cellular netwọk.
Ọ bụrụ na ị na-ahụ na oku na-aga ebugharị bụ gbanyụọ, nanị ịgbanwee na, na-abanye na mkpanaka gị na netwọk si olu mail ọnụ ọgụgụ na kọlụm na-ekwu, "na-atụ."
Na-na odi mfe n'akụkụ, na-akpọ gị cellular netwọk na-agwa ha banyere otu ihe ahụ.
3.Check ma ọ bụrụ na Ịma Ọkwa-arụsi ọrụ ike
Ọ bụrụ na ị na-aghọta na ị bụ na ezi mkpuchi netwọk ebe, na oku na-aga ebugharị na-setịpụrụ dị ka nke ọma, ma ị ka na-agaghị enwe ike anata olu mail Ịma Ọkwa, i kwesịrị ime n'aka na i nwere nyeere isi olu mail alerts.
Ego na-ada ntọala ma jide n'aka na olu mail ngosi anya bụ na.
4.Make n'aka na gị iPhone emewo arụnyere niile ọhụrụ mmelite
Tinyere Apple, ọbụna na ekwentị gị na-eweta ọrụ na-ezipụ emelitere ntọala maka ekwentị gị. Mgbe ọ bụla ị na-enweta ụgbọelu ntọala mmelite, jide n'aka na ị wụnye ha ozugbo. Ya mere, ọ bụrụ na gị iPhone olu mail na-adịghị arụ ọrụ na-n'agbanyeghị nri ntọala, ị kwesịrị ị na-eme ka n'aka na ekwentị arụnyere ụgbọelu mmelite na-arụ ọrụ na ọhụrụ version nke iOS.
5.Contact gị ekwentị netwọk
Ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-arụ ọrụ, dị nnọọ akpọ gị ụgbọelu si oru nkwado otu maka enyemaka.
Part 5: Olee otú iji tọghata iPhone olu mail ka ederede
Converting olu Gburu ka ederede bụ ihe kasị mma nhọrọ maka ndị na-ahọrọ na-agụ ha olu Gburu kama ige ha ntị. E nwere ọtụtụ ụzọ na-eme nke a, ị nwere ike iji iPhone si Anya Voice Mail atụmatụ, wụnye ngwa, ma ọ bụ jiri Google olu ọrụ idekọ olu gị Gburu na tọghata ha ka ha ederede.
Nke a na atụmatụ adịghị ekwe ka ndị ọrụ na-agụ dum ozi, ma iPhone ọrụ pụrụ ịhụ aha nke onye hapụrụ olu mail, tinyere usoro iheomume maka otu. A na-enyere ndị ọrụ na-họrọ na-egwu mkpa ozi ngwa ngwa.
Ụfọdụ rụọ-ekwe ka ndị ọrụ ha ka n'ezie na-agụ akụkụ ụfọdụ nke olu-ha mail n'okpuru nke a mma. Ma dị ka e kwuru, naanị ole na ole rụọ inye ọrụ a na iPhone ke United States.
2.Using Google olu
Nzọụkwụ mbụ bụ na-elu-Google olu nọmba maka akaụntụ gị, ma rụọ ọrụ Google olu maka ekwentị gị. Mgbe ahụ, na-aga keonodu oku ebugharị na ntọala gị na iPhone na-abanye na gị Google olu nọmba, nke mere na mgbe ọ bụla ị na-adịghị, niile oku ga-zijere Google olu na akaụntụ. Google ga-tọghata ozi olu n'ime ederede na-eme ka ha dị na ekwentị gị.
3.Install ngwa iji tọghata olu mail ka ederede
E nwere ọtụtụ ngwa ime ọrụ, ma YouMail Anya Voice Mail bụ otu n'ime ihe ndị kasị tụkwasịrị obi na kasị n'ọtụtụ ebe na ngwa. Ngwa si free version bụghị nanị atọghata olu mail n'ime ederede, ma ọ na-awade oku igbochi, oku na-aga nsochi usoro, eziga akpaaka-zaghachi listi ọkpọ oku, na ụfọdụ ndị ọzọ.
The ngwa ohere ọrụ ego olu mail eji kọmputa, iPad na iPhone. YouMail nwere ihe karịrị nde mmadụ isii na ọrụ na-eji ngwa zara karịa ise ijeri oku. YouMail dị na abụọ nsụgharị, ụgwọ mbipute na free. Ụgwọ mbipute ọzọ bụ ruru eru maka ọkachamara ma ọ bụ azụmahịa ojiji.
Ị Mail Anya Voice Mail na-mepụtara Irvine, California dabeere na ụlọ ọrụ na-akpọ Youmail, na ọ bụkwa maka android ọrụ.
> Resource> iPhone> Solutions iji tọgharịa oziolu paswọọdụ na iPhone (AT & T na Verizon)